Dadka reer Afghanistan ayaa quus ka taagan inay ka cararaan Daalibaan iyagoo ku qulqulaya garoonka diyaaradaha ee Kabul - Wardeeq 24 TV Dadka reer Afghanistan ayaa quus ka taagan inay ka cararaan Daalibaan iyagoo ku qulqulaya garoonka diyaaradaha ee Kabul Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Dunida Dadka reer Afghanistan ayaa quus ka taagan inay ka cararaan Daalibaan iyagoo...
Dadka reer Afghanistan ayaa quus ka taagan inay ka cararaan Daalibaan iyagoo ku qulqulaya garoonka diyaaradaha ee Kabul
Kumanaan reer Afgaanistaan ​​ah oo quus ka taagan inay ka baxaan dalka ayaa soo buux dhaafiyay garoonka diyaaradaha ee Kabul halkaas oo shan qof lagu dilay Isniintii kadib markii dagaalyahannada Taliban ay qabsadeen caasimadda, taasoo keentay in milatariga Mareykanka ay joojiyaan daad -gureynta si ay garoonka uga nadiifiyaan.
Dad badan ayaa ku soo ururay garoonka diyaaradaha iyagoo doonaya inay baxsadaan, oo ay ku jiraan qaar ku dheggan diyaaradda gaadiidka milateriga ee Mareykanka markii ay tagsi ku wadday waddada ay diyaaraduhu ku ordaan, sida ku cad muuqaalo ay soo saartay shirkad warbaahineed.
Mareykanka ayaa si ku -meel -gaar ah u joojiyay dhammaan duulimaadyadii daad -gureynta ee Kabul si loo nadiifiyo dadka ku soo ururay garoonka diyaaradaha, sarkaal ka tirsan difaaca Mareykanka ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters.
Sarkaalka oo ka gaabsaday in magaciisa la shaaciyo, ma uusan sheegin mudada hakadka uu qaadan doono.
Saraakiisha Daalibaan waxay ku dhawaaqeen dagaalkii 20-ka sano socday waxayna soo saareen bayaano loogu talagalay in lagu qaboojiyo argagaxa ka jiray Kabul iyadoo kooxda, oo maamulaysay 1996 ilaa 2001, ay jabiyeen ciidamadii Afghanistan ee ay taageerayeen Mareykanka markii ciidamada shisheeye ay ka baxeen.
Madaxweyne Ashraf Ghani ayaa dalka ka baxsaday Axaddii iyadoo Taliban ay soo gashay Kabul gabi ahaanba cidna aysan la tartamin, isagoo sheegay inuu doonayo inuu ka fogaado dhiig daata.
Illaa hadda ma cadda sida ay shanta qof ugu dhinteen garoonka diyaaradaha Isniintii. Sarkaal Mareykan ah ayaa sheegay in ciidamadu ay cirka u rideen rasaas si ay uga hortagaan dadka isku dayaya inay xoog ku maraan duulimaad milateri oo lagu waday inay magaalada ka saaraan diblumaasiyiinta Mareykanka iyo shaqaalaha safaaradda.
Mid ka mid ah markhaatiyaasha, oo sugayay duulimaad ka badan 20 saacadood, ayaa sheegay in aysan caddayn in shanta la toogtay ama la dilay isbuurasho. Saraakiisha Maraykanka ee ku sugan gegida dayuuradaha ayaan durbaba la haynin wax faahfaahin ah.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay rabshadaha booliiska ee Eswatini
Next articleJarmalka ayaa laga yaabaa inuu u baahdo inuu 10,000 oo qof ka badbaadiyo Afghanistan: Merkel